Ora iray Andro iray amin'ny haino aman-jery sosialy ... | Martech Zone
Andro iray Andro iray amin'ny haino aman-jery sosialy…
Asabotsy 4 Febroary 2012 Alahady, Septambra 30, 2012 Douglas Karr
Tena tsy misy a hitarika, isaky ny milaza, ho an'ny Media sosialy. Betsaka ny olona te-hilaza aminao izay tokony hatao ao amin'ny media sosialy na zarao ny paikadin'izy ireo mandresy… Saingy hitako fa niasa tamin'ny fomba hafa io saika ho an'ny orinasa rehetra niara-niasa taminay. Androany, Erik Deckers nizara ahy ity bitsika ity avy tamin'i Alexander Klotz:
Fanamby ho an'ny rehetra ny loharanom-pahalalana… ao anatin'izany ny orinasa kely. Ny tanjonay dia ny mametraka mailaka isan-kerinandro, lahatsoratra bilaogy roa isan'andro, ary hanohy resaka manerana ny Twitter, LinkedIn, Google+ ary Facebook. Tsy mahomby isika! Fanamby tokoa ny hoe manakarama loharano hafa isika ato ho ato masoivoho media sosialy mba hanandramana hitazomana fotsiny. Izany dia fandaniana mivantana amin'ny orinasa mety tsy hiteraka famerenam-bola mivantana… fa rehefa mandeha ny fotoana dia azoko antoka fa ho tanteraka izany.
Betsaka ny loharanom-pahalalana momba an'io lohahevitra io. Matetika aho miankina amin'ny Jay Baer, Jason Falls ary Michael Stelzner amin'ny olon-kafa toa Hubspot ho an'ny torohevitra amin'ny media sosialy. Mandritra ny eritreritro ny olona Hubspot mamirapiratra, ny paikadin'ny votoatiny dia paikady marketing inbound be loatra. Mizara fampahalalana izy ireo mba hitondra fiara mankany amin'ny orinasany manokana. Jay, Jason ary Michael dia manao asa lehibe amin'ny fitazonana ireo mpivarotra tsy manohitra (hilazalaza ampahibemaso ireo mpanohana azy ireo) fa mifantoka amin'ilay olana eo am-pelatanany sy ny mety ho vahaolana.
Raha ny marina, tsara ny fotoana ho an'i Alex - hanatrehana an'i Michael Fihaonana an-tampon'ny fahombiazan'ny asa sosialy madinidinika amin'ny faran'ity volana ity. Ilay fihaonana an-tampony dia kintana 22 manohana ny haino aman-jery sosialy mampianatra tompona orinasa sy mpivarotra ny fomba hifehezana ny varotra media sosialy (natolotry ny Social Media Examiner). Ireo mpanolotra dia misy Jeremiah Owyang (Vondrona Altimeter), Brian Solis (mpanoratra, Engage), Frank Eliason (Citigroup), Mari Smith (mpiara-mpanoratra, Marketing amin'ny Facebook), Erik Qualman (mpanoratra, Socialnomics), Michael Stelzner (mpanorina, Social Media Examiner), Dan Zarella (mpanoratra, The Social Media Marketing Book), Andy Sernovitz (mpanoratra, Marketing of Word of Mouth), David Meerman Scott (mpanoratra, Marketing ara-potoana & PR); manam-pahaizana avy any Boeing, Intel, Cisco ary Verizon; Jay Baer (mpiara-mpanoratra, The Now Revolution), Hollis Thomases (Mpanoratra, Marketing amin'ny Twitter), Steve Garfield (mpanoratra, Get Seen), Mario Sundar (avy amin'ny LinkedIn), ary Ann Handley (MarketingProfs) –nome anarana vitsivitsy fotsiny. (Fambara: izany no rohy ifandraisako).
Ireto ny torohevitra nomeko momba izany fitantanana haino aman-jery sosialy tsy misy loharanom-bola:
Famoahana loharanom-bola maro tsara lavitra noho ny iray. Aza manaraka na iza na iza antsoina Guru. Miara-miasa amin'ny orinasa isan-karazany isika rehetra ary nahita paikady nandresy, ny sasany very… ary im-betsaka io tetikady io ihany no mandresy SY resy. mandany 15 minitra andro iray hijerena ny lahatsoratra sy ny resak'izy ireo.
Tadiavo ny mpihaino anao. Ny fanarahana ny mpitarika, ny mpiara-miasa ary na ny mpifaninana amin'ny indostriao aza dia fomba mahafinaritra ahafahana miditra amin'ny mpihaino tadiavinao. Araho izy ireo ao amin'ny Twitter, toa azy ireo ao amin'ny Facebook, ampio izy ireo amin'ny Circles ao amin'ny Google+, ary aza miditra amin'ireo vondrona LinkedIn sasany. Ny fotoana hanatevin-daharana ny resaka raha vantany vao ataonao izany dia ho goavana tokoa. mandany 15 minitra iray andro ao amin'ny ny resaka izay zava-dehibe aminao sy amin'ny orinasanao.
Mamboly ny sainanao. Raha te ho mpitondra ianao dia lazao ny olona fa ianao no mpitondra ary maninona. Tsy mila miandry vao hotononina anarana… miandry elaela ianao. Mamporisika ireo orinasa kely hiara-miasa amiko aho hitoraka bilaogy, hiteny ary haneho ny fahefany. Manome trano fitahirizana afovoany ny bilaogy iray mba hitsidihan'ny olona sy hamakiany bebe kokoa momba anao sy ny zavatra niainanao - hahafahan'izy ireo mamaritra na hanao raharaha na tsia. Ny fitenenana eo no ho eo dia manome fanekena ny fahefanao… na dia minono aloha ianao aza! Ary mampiseho ny fahefanao amin'ny alàlan'ny fizarana tranonkala toa Slideshare dia mahafinaritra. mandany 20 minitra andro iray mamorona atiny.
Mampiroborobo ny tenanao. Aza manoratra lahatsoratra fotsiny, mi-tweet na manavao fa manantenà olona ho tonga. Tsy maintsy mandray ny fanapahana ho fampiroboroboana manokana ianao. mandany 10 minitra andro iray hampiroboroboana ny atiny. Amin'ny voalohany, mety ho fanararaotana fotoam-bavaka ho an'ny vahiny mihitsy aza io, miteny na mividy doka mihitsy aza mba hamoahana ny teny!
Tsy mandany tontolo andro amin'ny tambajotra sosialy aho… na dia mety ho toa izany aza. aho fandaharam-potoana lahatsoratra bilaogy ary manaparitaka fitaovana toa buffer hivoahana ireo fanavaozana ny sioka sy ny Facebook amin'ny fotoana mety indrindra. Ny fananana finday avo lenta amin'ny alàlan'ny fanavaozana ny haino aman-jery sosialy rehetra dia tsara - rehefa afaka manery minitra vitsivitsy etsy sy eroa aho eo anelanelan'ny fivoriana, eny an-dalana, na manana kaopy kafe dia afaka mandray anjara kely aho.
Farany, fampiasam-bola ity… tsy fividianana. Ny fandaniana adiny iray andro dia tsy hahazoanao ny valiny tadiavinao. Fa ny fandaniana adiny iray isan'andro mandritra ny herintaona dia hanome anao ny fiheverana! Milaza amin'ny olona aho mba hieritreritra an'izany toa ny fampiasam-bola hafa… ny lahatsoratra tsirairay, ny sioka tsirairay, ny fanavaozana tsirairay, ny mpankafy tsirairay, ny mpanaraka tsirairay… dia vola any amin'ny kaontinao daholo izy ireo. Raha mijanona tsy mampiasa vola ianao dia tsy hahazo ny zanabola mitambatra ilainao handoavana ny fampiasam-bola.
Manampia bokotra Pinterest Pinit amin'ny WordPress
7 Mey 2012 tamin'ny 2:57 hariva
Lahatsoratra tsara! Tiako ianao mamaky azy io amin'ny vola voafehy. Hitako foana ny olona mahatsapa fa mila izy ireo no voalohany maneho hevitra na mamaly. Ary rehefa tsy mahatsapa fa azo atao izany dia kivy izy ireo. Ho an'ny olona mbola tsy natomboka dia heveriko fa ny fandaniana adiny iray isan'andro mandritra ny herinandro iray fotsiny amin'ny fandrobohana ny tenany any amin'izay any ivelany any ary ny fanapahana hevitra hoe iza amin'ireo fitaovana mety indrindra amin'izy ireo no fomba tsara handraisana izany.
7 Mey 2012 tamin'ny 6:49 hariva
Misaotra betsaka, @ twitter-116342558: disqus! Ny haino aman-jery sosialy dia tena asa mafy, tsy miato izay misy tombony be nefa mety ho fanamby ihany koa. Hitako fa ny 'chunking' dia fomba tsara iray hahazoana vokatra rehefa manandrana mitelina asa lehibe toa izany ianao! Ankasitrahana indrindra.
Apr 9, 2012 amin'ny 10: 05 AM
Niady tamin'ny tsy fifandanjan'ny haino aman-jery sosialy aho hatramin'ny nanombohako efa-taona lasa izay… hatrizay niresahana an'ity lohahevitra ity tamina toro-hevitra sy fomba fijery tsara. Mafana, Susan